तिमी थोरै बढी समय लिएर आउ | यायावर शुशिल
Homeनेपाली लेखतिमी थोरै बढी समय लिएर आउ | यायावर शुशिल
यायावर शुशिल Friday, April 22, 2022
सुनन मैले उस्लाइ बोलाएर सोधे। उस्ले हजुर भन्नुस भन्दै मलाइ भनी। तिमीलाइ माया के जस्तो लाग्छ ? अचानक यस्तो किसिमको प्रश्न देखेर उस्ले भनी के भएको छ आज हजुरलाइ। ठिक त हुनुहुन्छ नि? म जनरल्लि सोधेको नि। सोध्न हुन्न र भनिदिए। जवाफमा उस्ले भनी थोरै चाहाना अनि बढी समय बर्बादि । मैले उस्को थोरै चाहाना वाला शब्दलाइ समातेर भने। त्यहि थोरै चाहाना भएर मलाइ कम समय दिने हौ तिमीले भनेर। उस्को जवाफ केहि काम नै हुदैन अनि किन बोल्नु भन्ने आयो। म मौन भए। उ पनि मौन भइ।
मेरो मौनता मेसेजमा मात्र सिमित भयो तर हकिकतमा म टोलाउदै सोच्दै थिए। आखिर किन उस्ले यसो भन्छे बनेर । उस्ले यसो भन्दा म आफुले आफुलाइ कति असफल भएको महशुस गर्दै छु। अचम्मको परिस्थिति मा छु । आफुले आफै सङ्ग कुरा गर्दै बस्दै छु। मेरो कुरा सुनिदिने एक उ थिइ। उ पनि पराइ भइ । आफै सङ्ग कुरा गर्ने क्रममा के चल्दै छ जिन्दगीमा भन्ने प्रश्न आउछ अनि बल्ल मेरो मन पनि मौन हुन्छ। केहि समयका लागि।
कति सपनाहरु बुनेको थिए। म तिम्रो हुने सपना। अहिले लाग्छ म म नै ठिक थिए जुन दिन तिम्रो हुने सपना देखे नि त्यो दिन देखि म म नै रहिन। घरि घरि त लाग्छ तिमीभन्दा तिम्रो तस्विर नै प्यारो। कमसेकम ति तस्विरले त सोध्छन् मेरो मौनता। अनि म मुस्कुराउदै जवाफ दिन्छु तिम्रै कारणले मौन छु म। तिम्रो एक मेसेज आओस् न । म पौडिन नजान्ने मान्छे समुन्द्रको गहिराइ कति छ भनेर एउटा टेप लिएर हामफाले जसरी तिम्रो मेसेजको रिप्लाइ दिन जान्छु।
मेरो समय नै खराब छ । मेरो माया कहिले कसैले बुझ्दैन भनेर हात मा हात राखेर बस्ने मध्यको म थिइन। म त इफोर्ट इफोर्ट अनि इफोर्ट भन्ने सिद्धान्तलाइ अँगालेर पछि हट्दै नहटि फेरि मेसेज गर्ने जोश ल्याए।
"मलाइ काम छ एउटा " भनि पठाए।
एकछिन सोचेर म लेखे,
"तिम्ले भन्ने अ भन्या सुन्न मन छ।"
"हाहा….. त्यस्तो नि काम हुन्छ र ।"
"यो त मेरो थोरै चाहाना हो नि।"
पहिले मायाको परिभाषाझैं उस्को जवाफ यस्तो आयो,
" के यो समयको बर्बादि हैन र?"
"मेरो किम्ति समय तिम्रै लागि हो नि माया।" म जिस्किदै भने।
"अनि हजुरले सबैलाइ यसरी नै बोल्दै पिच्छे प्रपोज हान्नु हुन्छ कि मलाइ मात्र हो।'' उस्को यस्तो किसिमको उत्तरले म भन्छु, "तिमि थोरै बढि समय लिएर आउ न मेरो लागि।" अनि थाहा पाउँछौ।
'' के गर्न सक्नु हुन्छ मेरो लागि?" उस्ले सोधि। "म तिम्रो लागि ज्यान दिन तयार छु।" मैले भनिदिए। मेरो जिन्दगीमा उस्को महत्व कति छ भनेर देखाउनलाइ पो भन्दिएको थिए थोडि न म त्यति कमजोर छु र। उस्ले हास्दै भनि म भोलि २ मिनट बढि मेसेज गर्छु ल। म मक्ख हुदैं भने " तिम्रो नामको सुसाइड नोट लेख्छु भनेको भए कति मिनेट बढ्ने थियो नि?''
उस्ले भनी, "त्यो हजुरले मिस हान्नु भयो। त्यति बेला नै भनेको भए मैले भनिदिन्थे कि आज म धेरै समय लिएर आएकी छु। भन्नु के के छ भन्न लाइ । म सुन्छु।"
Article Nepali Articles Story sushildevkota Yesterday कथा नेपाली लेख
अब त म तिमीलाइ भन्दा नि… | यायावर शुशिल
Nepali Articles 32
नेपाली लेख 28